ISIXHOBO ESITSHA ESINJENGETAMPON-ESINOKUTHINTELA UKUVUZA KWESINYI - IMPILO
Isixhobo esitsha esinjengeTampon-Esinokuthintela ukuvuza kwesinyi
Ifoto nguSdominick / Getty Izithombe
Ukuba uhleka, ukuthimla ngequbuliso, kunye nokukhohlela kulunge ngaphezulu kuluhlu lwakho loyika kakhulu, amathuba okuba ulungile unexinzelelo lokuchama ukungabikho komchamo (i-SUI). Kwaye awuwedwa. Ngokutsho kuqikelelo ukusuka kwiYunivesithi yaseWashington School of Medicine, ukumodareyitha ukuya kubunzima bokuchama komchamo kuchaphazela ukuya kuthi ga kwi-45% yabasetyhini.
Kude kube kutshanje, abasetyhini abanengxaki yokuvuza babeneenketho ezimbalwa: utyando, iiphedi okanye amanabukeni abantu abadala, kunye neepessaries, izixhobo ezinokuphinda zifakwe kwilungu lobufazi ukuxhasa isibeleko okanye isinyi kunye nokuthintela umchamo ukuba ungavuzi. (Zama ezi zi-4 ze-yoga ukunceda isinyi esivuzayo.)
Kodwa ngoku kukho inketho entsha ekhoyo kwiivenkile ezithengisa iziyobisi nakwi-intanethi. Kwaye 'kuyakhazimla,' utshilo uSteven A. Rabin, MD, FACOG, ugqirha wezifo zabasetyhini wase-California.
izongezo zokulahleka kweenwele kubafazi
Yenziwe nge-pad-and-tampon giant Poise, kwaye ibizwa ngokuba yi-Impressa.
URabin, ongadibananga nePoise okanye iImpressa, uthi ilingisa umbono weepesari kuba zisetyenziswa ngaphakathi ukunqanda ukuvuza kwesinyi ngaphambi kokuba kwenzeke. Kodwa, uthi, i-Impressa ingaphezulu, kulungile, iyamangalisa. (Ngaba ujongene nokuyeka ukuya exesheni? Emva koko jonga Isisombululo seNdalo sokuyeka ukuya exesheni ukunciphisa iimpawu zakho.)
'Iipessaries aziphumelelanga njengoko bekuxeliwe,' utshilo. Ngelixa iipessies zimalunga I-50% iyasebenza kwaye ifuna ukucocwa rhoqo, ama-92% abasetyhini ababandakanyekayo kuphando lweemarike ze-Impressa baxela ukuba baziva bomile.
Kodwa ayisiyo wonke umntu. Kuba injongo yayo kukuxhasa izihlunu ze-pelvic ezikhululekileyo, i-Impressa yeyabasetyhini abaphethwe yi-SUI, ethi ikhule xa umsipha uvula kwaye uvala ukuvulwa kwethambo lomthambo liphelelwe ngamandla, okanye xa izihlunu zomgangatho we-pelvic (exhasa isinyi, isibeleko kunye namathumbu) ziba buthathaka okanye zenzakalise — zihlala zibangelwa kukukhulelwa, ukuzala, okanye ubudala.
Ke ukuba ufuna ukungahambelani nomchamo (ukuba 'uhlala uziva'), ngekhe ukwazi ukulawula loo meko nge-Impressa. 'Ayenzelwanga ukuba abesifazana abane-bladder engaphezulu okanye usulelo lwe-urinary rhoqo,' utshilo uRabin.
Nangona iyimveliso entsha, i-Impressa ayisiyiyo kwaphela ingcinga entsha, ngokukaRabin noLauren Streicher, MD, unjingalwazi onxulumene neklinikhi kwezokubelekisa nakwigynecology kwiYunivesithi yaseNyakatho-ntshona kunye nombhali I-Rx yesondo: IiHormone, ezempilo, kunye neyona Ndoda yakho iQabane .
'Kudala ndixelela abantu basetyhini ukuba xa ufaka itampon kwilungu lobufazi, inokukunceda uyeke ukuvuza, utshilo uStreicher.
I-Impressa iza kwisicelo esifana netampon enkulu kwaye ifakwe ngendlela efanayo. Kwaye ukupakishwa kwayo sesinye isizathu sokuba uRabin ayibize 'ngokuqaqambileyo.'
'Zininzi izigulana ezingazukusebenzisa imveliso kuba aziqhelekanga kubo, utshilo. 'Abafuni ukudlala i-gynecologist kwaye bafumane indlela yokufumana into ngaphakathi kwilungu labo lobufazi.' Inyani yokuba i-Impressa igcinwe kwindawo yesiqhelo, yesixhobo seetampon yesixhobo inokwenza ukuba abafazi bakhululeke ngokuzama. Nabani na okhe wasebenzisa itampon uyayazi indlela yokuyisebenzisa kwaye azive ekhululekile ngayo, utshilo uRabin.
Nje ukuba ungene ngaphakathi emzimbeni wakho, i-Impressa ityhalela eludongeni lwakho lwangasese ukuvala isithuba phakathi kwerethra yakho kunye nelungu lobufazi. Ngokwenene ibizwa ngokuba 'yinkxaso yesinyi,' kwaye abantu basetyhini banokuyisebenzisa ukuya kuthi ga kwiiyure ezisibhozo.
Ngelixa uStreicher esithi i-Impressa kufanelekile ukuzama, ulumkisa ukuba ayizukusebenzela wonke umntu-ngakumbi abasetyhini abanoxinzelelo olukhulu lokungakwazi ukuzibamba. 'Akukho siphoso kuyo, akukho monakalo kuyo, kwaye ngokuqinisekileyo inokunceda, utshilo. 'Yinto elula, engangenisi mandla ukuyenza.'
URabin wongeza, 'Le yenye yezo zigulana zingafuni ukuthetha ngazo, kodwa ichaphazela abantu abaninzi, hayi nangokwasemzimbeni kuphela, kodwa nangokweemvakalelo.'
333 inani lokomoya
Iziva njani iintlungu zesifuba
Intsingiselo yokomoya 222
Ithetha ukuthini xa uqhubeka ubona i-333
Izihlangu zetennis ezilungileyo ze-plantar fasciitis